21:24:00 Anonymous No comments
ဒါကတော့ ကိုရဲထွန်းတို့ပါတီရဲ့ အလံ နဲ့ တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။
NLD ရဲ့ အလံ နဲ့ တံဆိပ်တို့ကို ကန့်ကွက်ချင်ရင် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ကန့်
အခု ကန့်ကွက်မယ့်သူ ပေါ်လာပါပြီ။ကန့်ကွက်သူကတော့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ( ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) ဆိုတဲ့ ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ပါတီရဲ့ အလံနဲ့ တူနေတာကြောင့် ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုရဲထွန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NLD ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပစဉ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခင်တုန်းကတော့ လွှတ်တော် လုပ်ငန်းစဉ်မှာ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေး ခြေလှမ်းဟု အစိုးရက ထုတ်ပြန်ပြီး အခြေခံဥပဒေကိုထောက်ခံရန်နှင့် ယင်းအခြေခံဥပဒေအရ NLD ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ရန် သတိပေးချိန်တွင် NLD က လက်မခံပဲ ၂ဝဝ၈ အခြေခံ ဥပဒေမှာ တဖက်သတ် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြကာ အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံ ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော NLD ပါတီဝင်များကပါ ရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုး စကားတွေ ပြောလာကြတော့သည်။
NLD ထဲမှ လူငယ်အချို့ကတော့ NLD ကို စွန့်ခွာပြီး NDF ပါတီ ကို တည်ထောက်ကာ ပါတီ မှတ်ပုံတင်၍ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းကတော့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မှာရှိတဲ့ အတိုက်အခံ အင်အားစုများနဲ့ အတိုက်အခံ မီဒီယာတွေ အားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သင့်ကြောင်းနဲ့ ပါတီ မှတ်ပုံမတင်သင့်ကြောင်း တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
အခုတော့ အရှက်ကင်းမဲ့စွာ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပါတီမှတ်ပုံတင် ၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို လက်ခံပါတယ်ဟုဆိုကာ တစ်ချိန်ကသူတို့ ပြောခဲ့သော ခွေးကောက်ပွဲသို့ ဝင်ကြတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အရင် NDF ပါတီနှင့်လဲ တရားဝင်ဟိုးလေးတကျော် ခမောက်လုခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲတုန်းက NDFက အနိုင်ရသွားတဲ့အတွက် ဒေါ်စုကြည်ဟာ ခမောက်ကို စိတ်နာပြီးလုံးဝမဆောင်းတော့ပါဘူး။အမြင်မှန်ရလာပြီး မှတ်ပုံတင်ကာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ့် NLD နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အသုံးပြုလာတဲ့ ခမောက်တံဆိပ်အစား တိရိစ္ဆာန် ဒေါင်းတံဆိပ်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ “အသစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ တံဆိပ်က ကြယ်ဖြူတစ်ပွင့်ရယ်၊ ခွပ်ဒေါင်းရယ်ပါ။ ခွပ်ဒေါင်းအောက်မှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ စာတန်း ပါပါတယ်။
ဒီတံဆိပ်သုံးမယ်ဆိုတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျင်းပတဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးပွဲမှာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ” လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အဒဖ ပါတီရဲ့ အလံဟာ တိရိစ္ဆာန်ဒေါင်းပုံပဲ ဖြစ်ပြီး အခု ပါတီတံဆိပ်ဟာလည်း ဒီ တိရစ္ဆာန်ပုံပဲဖြစ်နေပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ကို လံမှာတင်လွှင့်၊ တိရစ္ဆာန်တံဆိပ်ကို ရင်ဘက်မှာတပ်ကာ က အရေးမကြီးပေမယ့် ဒီတိရစ္ဆာန် ရဲ့ စိုးမိုးမှုအောက်က တိရိစ္ဆာန်စိတ်တွေ ဝင်နေတာ ဖျောက်ဖို့လိုကြောင်း NLD ကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သူ တစ်ဦးက သုံးသပ်ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံရောက် သမိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ကတော့ "သူ့ဘာသူ ခွပ်ဒေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ က ဒေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တိရစ္ဆာန်က တိရစ္ဆာန်ပဲ။ တိရစ္ဆာန်ကို နိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုရဲ့ ကိုယ်စားပြု အလံ လုပ်ပြီး ဦးညွတ်နေကြမှတော့ အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးက တိရစ္ဆာန်လောက်ကို မမြင့်မြတ်လို့ပေါ့။" လို့ ဆိုပါတယ်။
အဒဖ ပါတီဟာ အရင်တုန်းက ခမောက် တံဆိပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး လမ်းမှားလိုက်ကာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပါတီ နှစ်ခြမ်းကွဲကာ ခွဲထွက်သွားတဲ့ NDF က ခမောက်တံဆိပ်ကိုပါ ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အတင်းလိုက်ပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့အခု ခမောက်အစား တိရစ္ဆာန်ကို အစားထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်။
ခမောက်အစား ဆံပင်တု ကို သုံးဖို့ ပြည်သူတွေက အကြုံပြုပေမယ့် NLD က ဂရုမစိုက်ခဲ့
Myanmar Express: ဟီလာရီကလင်တန် ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်း ဒေါ်စုဆီ တန်းမ...
02:21:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: ဟီလာရီကလင်တန် ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်း ဒေါ်စုဆီ တန်းမ...: မြန်မာနိုင်ငံရောက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်ဟာ ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီ ကျော်က စပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ နိုင်...
Myanmar Express: အမေရိကန်ကို သတိထားပါ
02:18:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: ပါတီဝင် ၁၀ သိန်း နဲ့ အမျိုးသမီး ဦးစားပေး စီမံကိန်...
03:50:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: ပါတီဝင် ၁၀ သိန်း နဲ့ အမျိုးသမီး ဦးစားပေး စီမံကိန်...: မနေ့တစ်နေ့ကမှ အမြင်မှန်ရပြီး မှတ်ပုံတင်တဲ့ အဒဖ က ပါတီဝင် ၁၀ သိန်း လက်ခံမယ်လို့ ကြွေးကြော်နေပါတယ်။ ပါတီဝင်လျှောက်ထားမယ့်သူတွေကိုလည်း ဘာဆိုဘ...
Myanmar Express: ဟီလာရီကလင်တန် ဘာလဲ? ဘယ်လဲ?
03:49:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: မြန်မာဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ ညံ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
03:48:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: မြန်မာဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ ညံ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး: အင်္ဂလိပ်ကို ပထမဆုံးစစ်ရှုံးရတာ ကုန်းဘောင်ခေတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် မဟာဗန္ဓုလကပဲ ညံ့သလိုလို အပြစ်ပြောချင်ကြတယ်။ မဟာဗန္ဓုလရဲ့ တပ်သားတွေဟာ အရေးေ...
Myanmar Express: နိုင်ငံခြားမှ လူလိမ်တစ်ယောက်အကြောင်း ( ပေးစာ - ၅၆ ...
03:47:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြင်မှန်ရကာ ကိုယ်တိုင် ရွေးကော...
03:45:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြင်မှန်ရကာ ကိုယ်တိုင် ရွေးကော...: (အေအက်ဖ်ပီ) ဇာဇာစိုး ဘာသာပြန်သည်။ အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၄၅ ( ၂၅ ၊၁၁ - ၁ ၊၁၂ ၊ ၂၀၁၁) အင...
Myanmar Express: Gmail, Gtalk ဘယ်အစိုးရကမှ ကြားကနေ ဖောက်မဖတ်နိုင်ဘူ...
22:32:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: Gmail, Gtalk ဘယ်အစိုးရကမှ ကြားကနေ ဖောက်မဖတ်နိုင်ဘူ...: Gmail ကို အစိုးရရှဲ့ဆာဗာတွေကနေ ဖောက်လို့ရသတဲ့၊ Gtalk ကြီးကိုလည်း အစိုးရက အလွယ်တကူ ၀င်ကြည့်လို့ရသတဲ့နဲ့ မနက်မိုးလင်းလို့ ဆောင်းပါးတစ်ခု ...
Myanmar Express: NLD ပါတီဝင်အဖြစ် သင့်အား အလိုရှိသည် (မှတ်ချက်။ ။ ...
22:27:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: NLD ပါတီဝင်အဖြစ် သင့်အား အလိုရှိသည် (မှတ်ချက်။ ။ ...: အင်္ဂလန်သားကို ယူထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးပြီး အမျိုးသမီး ၁၁ ယောက် မတည်ကာ အဒဖ ပါတီတည်ထောင်ရေး လျှောက်ထားချက်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ...
သောက်တော်ရေခွက်တွင် ပေါ်သောပုံရိပ် နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ( ပေးစာ - ၅၅ )
22:20:00 Anonymous No comments
သောက်တော်ရေခွက်တွင် ပေါ်သောပုံရိပ် နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ( ပေးစာ - ၅၅ ):
စွယ်တော်မြတ်ရဲ့ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ထူးထူးခြားခြား သောက်တော်ရေခွက်ပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ ပုံရိပ်တွေအကြောင်းကို သတင်းစာ နဲ့ ဂျာနယ်အသီးသီးမှာ ဖော်ပြပြီးနောက်မှာ ယင်း သောက်တော်ရေရှိရာ အိမ်ကို နေ့ရောညပါ လာရောက်ကြည့်ရှု သူလှုဒါန်းကြသူများ များပြားနေပါတယ်။ အနီးနားဝန်းကျင်ကတဦးကမူ ကျမတို့ကအိမ်နားနီးတော့ ဘယ်အချိန်သွားသွားရတာဘဲဆိုပြိးနေလိုက်တာ မနေ့ကမှဖူးဘို့သွားတော့ ည ၃ နာရီမှဖူးခဲ့ရပါတယ် ..။
လူကြီးတွေလာကြည့်ပါတယ် မြို့နယ်မှုးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေလည်း လာပြီး ကောလဟာလ ဟုတ်မဟုတ်၊ နေရောင်ကြောင့်၊ ရေကြောင့် ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးကြပါတယ်။ သောက်တော်ရေခွက်ထဲမှာ စွယ်တော်ပုံပေါ်နေတော့ ရေခွက်ထဲလက်နှိုက်ပြီးမွှေပြီး စစ်ဆေးတာတွေ၊ အထဲကရေကို သွန်ပြီး အသစ်ပြန်ထည့်တာတွေ လုပ်ကြည့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အံ့သြောထူးဆန်းစွာပဲ ပုံရိပ်က ဆက်ပြီး ပေါ်နေပါတယ်။ နေရောင်ထိုးလို့ပေါ်တယ်လို့ အစက ထင်ကြပေမယ့် ညမှာလည်း ပေါ်နေပါတယ်။ လူကြီးတွေက မီးတွေ ပိတ်ခိုင်းပြီး တအိမ်လုံး မှောင်ကျသွားချိန်မှာ သူတို့ပါလာတဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတွေနဲ့ အပေါ်ကထိုးကြည့်လိုက်အောက်ကထိုးကြည့်လိုက်၊ ဖန်ခွက်ကိုတည့်တည့်မထိုးဘဲ တခြားဘက်ကိုထိုးထားလည်း ထူးခြားစွာနဲ့ ပေါ်မြဲပေါ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အခုဆို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကပါ ညပိုင်ရော မိုးအလင်းတန်းစီပြီးလာဖူးကြပါတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားလာတာက တဖြေးဖြေးကြည်လင်နေတာကနေ ရွှေအဆင်းကိုပြောင်းနေပါပြီ။ လာဖူးတဲ့လူတွေကလည်း ကြည်ညိုလွန်းလို့ လှူတန်းကြပါတယ်။ ပထမနေ့ မှာပဲ ၉ သိန်းလောက်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်နေ့တွေတော့ ပိုက်ဆံကို ရေတောင်မရေနိုင်တော့ပဲ ဆာလာအိပ်နဲ့ ၂ အိပ်အပြည့်ရပြန်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်ကတော့ ဘုရားတည်ရမှာလား ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတုန်းရှိပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်အချိန်ထိ သောက်တော်ရေခွက်ထဲမှာ တန်ခိုးတော် ပေါ်နေမယ်ဆိုတာ ကိုလည်း မသိတာကြောင့် ပျောက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် ရပ်ဝေးက လူတွေကပါ လာရောက်ဖူးမြှော်တာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် ဒီလိုဖြစ်စဉ် မရှိခဲ့ပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာမှ ဒီလိုဖြစ်ရတာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအားလုံးကို ဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့၊ သာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
( သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ
စွယ်တော်မြတ်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း) က လာရောက်ဖူးမျှော်ပြီး အလှူဒါနတွေ ရက်ရက်ရောရော လှူသွားပေမယ့် NLD က တရားရှာရမယ့် အရွယ်ရောက်နေတဲ့ အဖိုးကြီးတွေကတော့ တစ်ယောက်မှ လာမဖူးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ် ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘောလုံးပွဲကိုတောင် သွားကြည့်နိုင်ပေမယ့် စွယ်တော်ကိုတော့ လာဖူးဖို့ မေ့နေပါတယ်။
သောက်တော်ရေခွက်ထဲမှာ ပုံရိပ်ပေါ်တာဟာ အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်လို့ လူအများက အသိအမှတ် ပြုကြပါတယ်။ ဒီထက် ထူးဆန်းတာကတော့ မြန်မာလူမျိုးလည်းဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာလည်း ဖြစ်တဲ့ လူတွေကပဲ နေရောင်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ စမ်းကြည့်တာ မပေါ်ကြောင်း စတဲ့ သတင်းတွေ လွှင့်နေကြတာပါပဲ။
ဘာမဟုတ်တဲ့ ဇာဂနာ ရဲ့ ပက်စပို့အကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြကြပေမယ့် စွယ်တော်မြတ်အကြောင်းကို အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြနေကြတာတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အလွန်ရှားပါးနေတာကို သတိထားမိပါတယ်။ မယုံသင်္ကာနဲ့ ဝေဖန်နေကြတာတွေကိုတော့ အနှံ့အပြားတွေ့ရပါတယ်။
အတိုက်အခံများအနေနဲ့ တခြားနေရာတွေမှာပဲ ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ဒါမျိုးကိုတော့ ကန့်လန့်မတိုက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ရှေးဘဝတွေက ဘုရားမှန်း တရားမှန်း မသိခဲ့လို့ ခုလို လူမွှေးလူတောင် မပြောင်တဲ့ အတိုက်ခံဘဝ၊ လူတကာ ရွံရှာမုန်းတီး ကျက်သရေမဲ့ကာ လုပ်သမျှ မအောင်မြင်တဲ့ အတိုက်အခံဘဝကို ရောက်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ဒါကို သံဝေဂ မရပဲ ဆက်မိုက်နေရင် နောင်ဘဝတွေမှာပါ ဆက်ပြီး အကျိုးဆက်တွေ ခံစားနေရပါလိမ့်မယ်။
ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့ အတိုင်း မင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့ မြအေးတို့ကလည်း အရင်ဘဝက မေတ္တာတရားခေါင်းပါးကာ သတ္တဝါတွေကို ဖမ်းပြီး လှောင်အိမ်တွေထဲ ထည့်ခဲ့လို့ ခု ဝဋ်လည်နေကြပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အရင်ဘဝက သူများမိသားစုကို ကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့် ခုဆိုရင် သားတွေက အတူမနေနိုင်ပဲ သားတွေက ခဏလောက်လာပြီး ပြန်သူကပြန်၊ လုံးဝ မလာသူက မလာ ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဒီအကုသိုလ်ကံတွေ ပြေပျောက်စေဖို့ စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွ ဖျောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တဲ့ အရိပ်အောက်မှာ မှီခိုပြီး အပြစ်တွေကို ဆေးကြောဖို့ ကောင်းနေပါပြီ.... )
စွယ်တော်ကိုတော့ ဖူးဖို့ သတိမရ၊ ဘောလုံးပွဲတော့ အပြီးထိသွားကြည့်တဲ့ ၆၇ နှစ်အရွယ် ဒေါ်စု
22:18:00 Anonymous No comments
ဒီမို ဖက်တီး : ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ ၁၆ နှစ်လုံးထောင်ကျခဲ့တာမို့ သူ့ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာမ
ှမြင်ဖူးခဲ့တယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန်ကတော့ တောခိုခဲ့တာမို့ ပြည်ပမီဒီယာတွေက တဆင့်
မြင်ဖူးကြားဖူးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ စွန့်လွတ်ခဲ့မှုအတွက် လေးစားခဲ့တယ်။
ကိုအောင်မျိုးထွန်းတို့ ၊ ကိုဇာနည်တို့လည်း ဒေါ်စုနဲ့ အမြင်မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
ဂါရ၀ တရားတော့ ရှိကြပါတယ် .... သူတို့ ရေးတာတွေကို ကျုပ်ဖတ်လို့ ရတယ်
ခင်ဗျားက ဘာကောင်လဲ ကိုမိုးသီးဇွန် ... အသက်လည်း ငါးဆယ်ပြည့်ပေါ့ ... ဂျပိုးသူခိုးလို ရိုင်းစိုင်းတယ် .... ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လို မကျင့်ကြံဘူး Shit_Shit ဖြစ်နေပြီ ......
( ကိုမိုးသီးရဲ့ အသိမိတ်ဆွေများလည်း ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကျပါ )
MrMaung KoThet : STUPID
Khin Maung Htway : ဒီကောင် ဒေါ်လာ ပျောက်တော့မှာမို့ ကရောင် ကတန်း ပြောဖြစ်မယ်.........။
Aung Hein : လူ့အဆင့်အတန်းအား ထိုသူပါးစပ်မှ ထွက်သော စကားသည် ပြဌာန်းလေသည်။ လေတိုက်တိုင်းလမ်းပျောက်ရလျှင် ယနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟူ၍ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။ ယခု လေပုပ်လေသိုးများ တိုက်ခြင်းထက် အဆများစွာ ပြင်းထန်သော ဖိနှိပ်ခြင်းများကို ထို အမျိုးကောင်းသမီးသည် ကြံ့ကြံ့ခံ ရှင်သန်ပြခဲ့ပြီးလေပြီ။ မစင်ဘုပ်နံ့သည် မဇ္ဈူသက နတ်ပန်းရနံ့ကို မလွှမ်းစကောင်းချေ။ နားမလည်သော ထိုလူမိုက်အားသာလျှင် ကရုဏာသက်ရပေသည်။
Ah Bayah : အောက်တန်းစားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Sai Zaw : now only you know about moe thee zun ? we never add that kind of people in our friend list :)
Moken Lay : အချို့ကပြောတယ် လူတစ်ယောက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းက အဲဒီလူရဲ့တန်ဖိုးပဲတဲ့။ မိုးသီးဇွန်ဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့သမိုင်းကိုလိုက်ကြည့်တော့ ပတ်မကြီးထိုးဖေါက်တဲ့သမိုင်းတွေပဲ ဖုံးနေတော့ ဘယ်လိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရမယ်တောင် မသိတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကျနော်က သမိုင်းဟာ တန်ဖိုးဆိုတာထက် အနာဂါတ်သာတန်ဖိုးလို့ ယုံကြည်ထားတာမို့ ဒီလူရဲ့အနာဂါတ်ဟာ တန်ဖိုးတွေနဲ့ပြည့်နေမလားကြည့်မိပါတယ် ရှေ့ဆက်လဲ ဒီလူကြီး ဒီလိုပဲ ဘေးထိုင်တောချာက်ပြီး ပတ်မကြီးထိုးခွဲဖို့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အာပလာပေးနေဦးမှာပဲလို့မြင်ပါတယ်။
Lay Pyay Soe : မိုးသီးဇွန်ဆိုတဲ့လူက ပညာမပြည့်ခင် ယောင်ယောင်မှားမှား အသိနည်းပါးစွာနဲ့ တောခိုခဲ့လေတော့ ... ဘာမှမသိတဲ့ ကလေးမသာ စကားလုံးတွေပဲ ထွက်ထွက်လာတော့တာပေါ့ ...... အဲဒီ မိုးသီးဇွန် အလကား ဖွတ်ကြား မင်းသားကြီး လုပ်ချင်တဲ့ လူပါပဲ ....
Aung Ko Oo : ဒီကောင်ကြီးက တောကြောင်အကြီးစားကြီးပဲ ဘရို တို့ ရေ။ ၈၈ တုန်းကတည်းက ကျောင်းသားမဟုတ်တော့ပါ။အရွယ်လွန်နေခဲ့ ပါတယ်။ဒီဘီလူးတွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သူ ခေါင်းဆောင်တဲ့"ဒ မ ဖ" ဆိုတဲ့ ပါတီရှိတယ်။ အကုန် "အင်"တွေချည်းပဲ။နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျောက်ပြီး လုပ်စားနေကြတာ။ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ လူကအစ ကြာကူလီ လုပ်နေတာ ဟိုးလေးတကျာ်ကျော်ပေါ့အပုတ်နံ့ က..:))
Lay Pyay Soe : သေခါနီး လူတွေ အကုသိုလ်ဖိစီးသမျှ သွေးရူးသွေးတမ်း ဖြစ်သလို ..တစ်သက်လုံး တိုင်းပြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လက်ညိုးထိုး အကြောင်းပြ ရောင်းစား ခဲ့လေသမျှ ခုမှ အကုသိုလ် ဖိစီးသလို သိပ်ကို လူနဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့ ခွေး သာသာ စကားတွေ ထွက်လာတော့တာပေါ့ သနားစရာကောင်းလှပါလား မိုးသီးဇွန်
Laythee Htan : မိုးသီးဇွန် = ABSDF ရဲ့ စောက်သုံးမကျဆုံး ကျောင်းသားခေါင်းရှောင်တစ်ဦး။ ABSDF အဖွဲ့သားအချင်းချင်း တောထဲမှာ သစ္စာဖောက်လို့ မှားရွင်းစွတ်စွဲရင်း လူအုပ်စုလိုက်အချင်းချင်း ပြန်သတ်ခဲ့သူ။ အောက်လက်ငယ်သားတွေကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပါးရိုက်အုပ်ချူပ်ခဲ့လို့ ABSDF နှစ်ခြမ်းကွဲရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ငွေကို ရှယ်ရာဝင်ယူ မြိုစို့သူ။ တဏှာယူး အကြီးစား စောက်ကုလား မိုးသီး။
Kyaw Myat Thu : စောက်ဖတ်လုပ်စရာမှမရှိတာ ဘာလိုလို ညာလိုလိုနဲ့ပြည်ပြေးပြီးထိုင်စားနေတဲ့ကောင်တိုင်းပြည်တွက်ဘာများလုပ်ပေးဖူးလို့လည်း အဟုတ်တာကလွဲရင် စောက်ရူးပဲလို့ပဲပြောတော့မယ်ဒါတောင်ဂါရ၀တရားအရှေ့နည်းနည်းထားထားလို့နောက်မို့ဆိုပိုဆဲခံကမယ်
ခင် သံလွင် : အမိယုတ်တော့နုတ်ကြမ်း၏တဲ့
Yan Aung : မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ..။ ဘုန်းကြီးတွေမန်းလေးမှာ ဆန္ဒပြတုန်းကလည်း လူထုကို အုံကြွဖို့ အမေစုက ခိုင်းသလိုလို သူ့ဘလော့ဂ်မှာ စည်းရုံးခဲ့သေးတယ်။ အခု မှတ်ပုံတင်ပြီဆိုတော့လည်း ရစရာမရှိအောင် ပုတ်ခတ်တယ်..။ သူ့သမိုင်းသူရေးနေတာပဲ..။
Laythee Htan : ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ လူအများစုရဲ့ သဘောထားကို အလေးပေးလိုက်နာ ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ မိမိ တို့ Funding အဖြတ်ခံရတိုင်း ဘီယာသောက်ပြီး ထိုင်ဆဲနေလို့မရပါဘူး။ ဒါကို ဂေါက်သီးနားလည်ပေးနိုင်ပါစေ။
Kyaw Zwa Lwin : တရားတရားဟောပါများ တရားထဲကပါဠိရ၊ စကားစကားပြောပါများ စကားထဲကဇာတိပြ။
Khun Thar : ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒါမျိုးတွေက..သိပ်မကြာခင်သူတို့တွေက ငတ်တော့မှာလေဗျာ ။ အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် ပူးပေါင်းရင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် ရနေတဲ့သူတွေ ပြန်လာရတော့မှာ ဆိုတော့ သူတို့ကြောက်ကြလေပြီပေါ့ ။
Zayar Htun : မိုးသီးဇွန်ကပြောလိုက်ရင်၈၈တွေဘဲတိုင်းပြည်ဦးဆောင်ရတော့မလို၂ နဲ့...88တွေမဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်မချစ်ရတော့ဘူးလား...မင်းတို့ ၈၈ တွေဘာလုပ်လဲပြောပါအုံး.
Zayar Htun : တွေ့ သမျှ၈၈တွေအရက်သောက်နေတာဘဲတွေ့ တယ်... ဒါလားနိုင်ငံရေး.. ၈၈တွေမုန်းလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး..၈၈မဟုတ်ရင်ဘဲတိုင်းပြည်မချစ်သယောင်ပြော၂ နေ လို့ မခံနိုင် လို့ ဝင်ပြောတာ..
Ma May : ဒီမနက် အသုတ်ဆိုင်သွား ဆိုင်ရှင်ကမေးတယ်မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲတော့မှာမို့ အဖွဲ့ အစည်းတခုမှ လစာနဲ့ စာရေးလုပ်ရသူရဲ့မိန်းမက ညည်းသွားတယ် တဲ့ ဒုက္ခပါပဲ ဒီလို ပုံစံဆို ဘယ်နိုင်ငံကထောက်ပံ့တော့ မလဲ ကျမတို့ တော့ လစာတွေ ပျက် ပါပြီ တဲ့ ဟုတ်လားအမတဲ့ ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်တာလဲတဲ့ ကျမက အခြေနေမှန်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့ အသုတ်ရောင်းသူကတောင် အားလုံးကောင်းစားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥဏ်နဲသူမှမဟုတ်တာ ဒီလူတွေသူတို့ အတွက်ပဲကြည့်တာကိုး တဲ့(သဘောပေါက်ပါ NGO အကြီးစာပရယ်ပိုဇယ်အကြီးစားတွေ ဘယ်လောက်များခံစားနေရမလဲလို့-)
Moken Lay : ကိုမိုးသီးလား အရက်သောက်ပြီး ဖွန်ကြောင်နေတယ်လေ
ရင်ခွင် သစ် : မိုးသီးကအရူး အဖက်လုပ်မနေပါနဲ့ 
Myat Lay Ngon : အဖတ်မလုပ်တာကတော့ ကျမ တို့မဲဆောက်မှာ နေစဉ်တည်းပါဘဲ၊ သူ့အရှုးကွက်နင်းနေ ကြာနေပါပြီး အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး.။
ရင်ခွင် သစ် : ခုအမေရိကားမှာ ဘယ်သူမှသုံးမစားလို့မဲဆောက်မှာပြန်ပြီးလိမ်စားနေတယ်လေ
Myat Lay Ngon : မဲဆောက် မှာလည်း သူလိမ်လိုမရပါဘူး၊ သူဖွဲ့တဲ့ အဖွဲ့တိုင်း အကွဲအပြဲ ပါဘဲရှင်.။
Green Delta : မိုးသီးဇွန်ဆိုတဲ့လူက သူတောခိုနေတုန်းက ဆေးတွေချပြီးဂေါက်နေလားမသိဘူးဗျာ။ သူ့ wall ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများက အခြေအမြစ်မရှိ၊ အဆင့်အတန်းမရှိမှန်းအရမ်းသိသာတယ်။ ဒီလူမဂေါက်လို့ကတော့ သူ့ဆရာတင်မိတဲ့လူက ဒေ၀ဒတ်ဆရာတင်တဲ့လူထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးမယ်။
Lin Htein : မြအေးသမိုင်းလည်းသမီးမိုက်ကြောင့်သမိုင်းပျက်ပြီ။
Myat Kyaw : စော်ကား မော်ကား..ထိုလူသားကို..ပြည်ပ နှင် ထုတ်...( နှင်ထားတာတော့ ကြာပါပြီ )..မြိုင်ရပ်ပို့ လော့ ..( မြိုင်ရပ်တောင်မှ..ဒီကောင်ဝင်လာရင်.ပျက်စီးမှာအမှန်ပဲ )..လွန်စွာ မိုက်ရိုင်းလှလေခြင်း.....
၈၈ ကျောင်းသားများသည် သူခိုးဂျပိုး အရိုင်းအစိုင်းများဖြစ်သည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် နားမလည်သော လူမိုက်များဖြစ်ကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် အောက်တန်းစားများဖြစ်သည်
၈၈ ကျောင်းသားများကို ဘယ်သူမှ မိတ်ဆွေမဖွဲ့ချင်ကြ
၈၈ ကျောင်းသားများ၏ သမိုင်းသည် ပတ်မကြီးထိုးဖေါက်တဲ့သမိုင်းတွေ ဖုံးနေနေပြီး တန်ဖိုးမရှိသူများဖြစ်သည်။
၈၈ ကျောင်းသားများသည် ဘေးထိုင်တောချာက်ပြီး ပတ်မကြီးထိုးခွဲဖို့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အာပလာပေးနေဦးမည်ဖြစ်သည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် ပညာမပြည့်ခင် ယောင်ယောင်မှားမှား အသိနည်းပါးစွာနဲ့ တောခိုခဲ့ကြသည် ထို့ကြောင့် ဘာမှမသိတဲ့ ကလေးမသာ စကားလုံးတွေသာ ထွက်လာကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများ တောခိုသည်ဆိုသည်မှာ တောထဲမှာ ဆေးချကြခြင်းဖြစ်သည်၊ အဲဒီအရှိန်ကြောင့် အခု ဂေါက်နေကြသည်။
၈၈ ကျောင်းသားနာမည်ခံသူများတွင် ကျောင်းသားမဟုတ်သော အရွယ်လွန်နေသူများပါဝင်သည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် အကုန် "အင်"တွေချည်းပဲ ဖြစ်သည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျောက်ပြီး လုပ်စားနေကြသူများဖြစ်သည်
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် ကြာကူလီ လုပ်သောကြောင့် ဟိုးလေးတကျာ်ကျော် အပုတ်နံများ ထွက်နေသည်
၈၈ ကျောင်းသားများပါးစပ်မှ ခွေး သာသာ စကားတွေ ထွက်လာကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် ရိုဟင်ဂျာ ငွေကို ရှယ်ရာဝင်ယူ မြိုစို့သူများ ဖြစ်ကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် တဏှာရူးများ ဖြစ်ကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် ပြည်ပြေးပြီး ထိုင်စားနေသူများဖြစ်ကြသည်၊ တိုင်းပြည်တွက်ဘာမှ လုပ်မပေးဖူးသူများဖြစ်ကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် အမိယုတ်များမှ မွေးဖွားလာသူများဖြစ်ကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် ဂေါက်သီးများဖြစ်သည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် Fund အဖြတ်ခံရတိုင်း ဘီယာသောက်ပြီး ထိုင်ဆဲတတ်ကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် အရက်သောက်ပြီး ဖွန်ကြောင်နေသူများဖြစ်သည်
၈၈ ကျောင်းသားများသည် အရူးကွက်နင်းကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများကို ဘယ်သူမှ မဖတ်မလုပ်ချင်ကြ၊ သူတို့ဖွဲ့သမျှ အဖွဲ့အားလုံး ကွဲကြသည်
၈၈ ကျောင်းသားများကို ဆရာတင်သူသည် ဒေဒတ်ကို ဆရာတင်သည်ထက် ပိုဆိုးမည်ဖြစ်သည်
တွေ့ သမျှ ၈၈တွေအရက်သောက်နေတာဘဲတွေ့ တယ်... ဒါလားနိုင်ငံရေး.. မင်းတို့ ၈၈ တွေဘာလုပ်လဲပြောပါအုံး??
ABSDF အဖွဲ့သားများသည် အုပ်စုလိုက် အချင်းချင်း ပြန်သတ်ခဲ့ကြသည်
ABSDF အဖွဲ့သားများသည် လက်အောက်ငယ်သားများကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပါးရိုက်အုပ်ချုပ်ကြသည်
ABSDF အဖွဲ့တွင် အချင်းချင်း မကျေနပ်တာတွေများပြီး နောက်ဆုံးမှာ နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရသည်
NGO များသည် လုပ်စားလို့ မရတော့တာကြောင့် ခံစားနေကြရသည်
ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများ ဒေါ်လာ ပျောက်တော့မှာမို့ ကရောင် ကတန်း ပြောနေကြသည်
ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများသည် သိပ်မကြာခင် ငတ်တော့မှာဖြစ်သည် )
ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများသည် သိပ်မကြာခင် ငတ်တော့မှာဖြစ်သည်
MEG လျှောက်မရေးပါ၊ မစွပ်စွဲပါ။ အတွင်းသိများက ဖွင့်ချခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၈၈ ကျောင်းသားများကို အထင်ကြီးသူများ၊ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအင်အားစုများကို အားကိုးသူများ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် အကြောင်း၊ ကျောင်းသားတပ်ဦးအကြောင်း၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကြောင်း မသိသူများ မှတ်သား၊ သတိထား ကြပါကုန်....။
NLD ဟာ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက် အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာထက် ပါတီ မပျက်အောင်ပဲ မနဲထိန်းခဲ့ရကြောင်း သမိုင်းက သက်သေပြ
02:57:00 Anonymous No comments
NLD ဟာ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက် အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာထက် ပါတီ မပျက်အောင်ပဲ မနဲထိန်းခဲ့ရကြောင်း သမိုင်းက သက်သေပြ:
NLD ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချိုးအကွေ့တိုင်းမှာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး အကျိုးကို လုပ်ဖို့နေနေသာသာ ပါတီမပျက်အောင်နဲ့ သူ့ပါတီ ပါတီရပ်တည်ရေး အတွက်ပဲ စဉ်းစားနေတာပါ။ သူတို့ပြောပြောနေကြတဲ့ သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချခဲ့တဲ့ သမိုင်းကိုကြည့်ရအောင်...
၁။ NLD ပါတီ မပျက်ရေးအတွက် အရင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါတီက ထုတ်ပစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
၂။ NLD ပါတီမပျက်ရေးအတွက် အရင်က အမျိုးသားညီလာခံကို တက်ခဲ့တယ်။
၃။ NLD ပါတီမပျက်ရေးအတွက်တဲ့ အခု မှတ်ပုံတင်ပါမယ်တဲ့။
၄။ NLD ပါတီမပျက်ရေးအတွက် ၉၀ ရလဒ်က လက်တွေ့မကျတော့ဘူးတဲ့။
၅။ NLD ပါတီမပျက်ရေးအတွက် မကြာခင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် မယ်။ လစ်လပ်တဲ့နေရာ ၄၀ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်တဲ့။
၂၃ နှစ်လုံး စဉ်းစားလုပ်နေသမျှ အားလုံးက ပါတီမပျက်ရေးအတွက်ပဲ။ အရင်ကလုပ်ခဲ့သမျှအားလုံး၊ အခုလုပ်နေသမျှ အားလုံးက ပါတီမပျက်ရေးအတွက်ပဲ။ ဘယ်လိုအရည်အချင်းမရှိတဲ့ လူတွေစုနေလို့ ပါတီလေးတစ်ခု ရပ်တည်ဖို့ ၂၅ နှစ်နီးပါး ရုန်းကန်နေရတာလဲဆိုတာ သူတို့ပြောသလိုပဲ သမိုင်းက သက်သေပြနေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံစားမိလို့ NCGUB ပျက်တော့မည်
02:56:00 Anonymous No comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံစားမိလို့ NCGUB ပျက်တော့မည်:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဒဖ ကို မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုံးထောက်ခံတယ် ကန့်ကွက်သူ မရှိပါဘူးဆိုပြီး အတင်းအဓမ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်မှာ ပြည်ပရောက် အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ NCGUB ကို ဖျက်သိမ်းရတော့တယ် အခြေအနေ ရောက်သွားပါတော့တယ်။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ သူလဲ ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ပရောက် အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB ဟာ ဆက်လက် ရပ်တည်စရာ မလိုတော့ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းက သူ့အမြင်ကို ပြောပြပါတယ်။ ရှိနေတုန်းကလည်း မြန်မာပြည်နဲ့ လူထုအတွက် ဘာမှမလုပ်ခဲ့လို့ ခု ဖျက်မယ်ဆိုတော့လည်း ဘယ်သူမှ ဝမ်းမနည်းကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိသားစုဝင်တွေကတော့ နေထိုင် စားသောက်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးငွေ မရရှိတော့မှာကို စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ NCGUB နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။
အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB အဖွဲ့ကို ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ဦးဆောင်ပြီး ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အမတ်တွေနဲ့ မာနယ်ပလောစခန်းမှာ သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ ၁၉၉ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာ ဦးစိန်ဝင်းက အမြဲတမ်းဝန်ကြီးချုပ် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ပါဆိုပြီး နာမည်ခံထားပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ဆိုတာတောင် ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ ဝန်ကြီးချုပ် သက်တမ်းကလည်း ခုဆိုရင် ၁၁ နှစ်တောင် ရှိနေပါပြီ။
အစိုးရကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ NLGUB အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ NCGUB အဖွဲ့ကို ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ NCUB အဖွဲ့ဆိုတာလည်း ထပ်ပြီး ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ မြန်မာအတိုက်အခံတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အဝေမတည့် ဖြစ်ပြီး အချင်းချင်း သဘောထားတွေ ကွဲကာ အဖွဲ့တွေ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
NCGUB ပျက်ရင် NCUB လည်း ပျက်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ MPU ခေါ် လွှတ်တော်အမတ်များ သမဂ္ဂ လည်း ပျက်၊ CRPP လည်း ပျက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၃ နှစ် ကျော်အတွင်းကတော့ အတိုက်အခံတို့ အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့လို့ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အစိုးရက အဖွဲ့သစ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖွဲ့နေပြီး အတိုက်အခံအဖွဲ့တွေကတော့ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပျက်နေပါတယ်။
02:54:00 Anonymous No comments
NLD အမှတ်တံဆိပ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုမည်:
အဒဖ ကို ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်အပြီးမှာ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ပါတီ ၉၃ ပါတီအနက် ခမောက်တံဆိပ်ကို ပါတီအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ပါတီသက်တမ်းတလျှောက်တွင်လည်း ခမောက်တံဆိပ်ကို အစဉ်တစိုက် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ပါတီဝင်အားလုံးကလည်း ရေချိုးချိန်နဲ့ အိပ်ချိန်ကလွဲပြီး ခမောက် မချွတ်ခဲ့ကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အဒဖ နှစ်ခြမ်းကွဲပြီး (NDF)က ခမောက်ပုံအား ပါတီ အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပါတီတွင်း နှစ်ခြမ်းကွဲရုံမျှ မက ပဲ အဒဖ က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ ကန့်ကွက်ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မရှိ ခမောက်လုနေကြပြီး အချင်းချင်းကိုက်နေကြလို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာသာမက ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပါတီ၏ အမည်၊ အလံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့ အခြားပါတီတခုရဲ့ အမည်၊ အလံ၊ အမှတ်တံဆိပ်တို့နှင့် တူညီလျှင် သို့မဟုတ် ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်နေလျှင် ကွဲပြားစေ ရန် ကော်မရှင်က ညွှန်ကြားရမည် ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခမောက်အစား ဘာသုံးမလဲဆိုတာကို MEG က အဒဖ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေထက် ရှေ့တစ်ကွက်ကြိုမြင်ကာ လူထုဆန္ဒကောက်ခံမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အထိတော့ ခလောက်အစား ဆံပင်အတု သုံးဖို့ကို ၄၄% နှုံးက ထောက်ခံထားပါတယ်။ အဒဖ လိုဂို အတွက် လောလောဆယ် ရာထားတာကတော့ အောက်ပါပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
20:23:00 Anonymous No comments
တာဝန်ကျေသော ဥယျာဉ်မှူးကြီး - ပြည်သူ့ တပ်မတော်:
Myanmar Express: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မေးခွန်း (၅၅) ခု
20:21:00 Anonymous No comments
Myanmar Express: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မေးခွန်း (၅၅) ခု: ၁။ တစ်နှစ်အတွင်း ဘာမှ သိသိသာသာ တိုးတက် ပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ?? ၂။ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်ကရော လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာ ဘာရှိလဲ?...
20:04:00 Anonymous No comments
အမြဲတမ်းမှားနေတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က အတိုက်အခံတို့ရဲ့ သတင်းများ:
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံက မနေ့က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မတူသလို ဒီနှစ် မြန်မာနိုင်ငံက မနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မတူအောင် ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေသာမကပဲ ကုလသမ္မဂ္ဂ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန် နဲ့ တခြား အနောက်နိုင်ငံတွေကပါ လက်ခံလာတဲ့အထိ တိုးတက်မှုတွေ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မီဒီယာ ပိုင်းမှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ အများကြီးရခဲ့ပြီး အရင်းတုန်းက မပါတဲ့ စကားလုံးတွေ အခုတွေ့နေရပြီဖြစ်ကြောင်း မကြာခင်က ထောင်ကထွက်လာတဲ့ လူအများ ရှုံ့ချခြင်းခံနေရသော လူပျက် ဇာဂနာ ကတောင် ဝန်ခံခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရဖက်က ပျောင်းလဲမှုတွေ ဘယ်လိုပဲလုပ်ဆောင်နေပေမယ့် မီဒီယာ သမားတွေကတော့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ လုံးဝ ပြောင်းလဲ ခြင်းမရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပအခြေစိုက် အတိုက်အခံ မီဒီယာတွေနဲ့ facebook နဲ့ ဘလော့ တွေပေါ်က ဝါဒဖြန့်သမားတွေကတော့ ဘာပြောင်းလဲခြင်းမှ မရှိပဲ ထုံးစံအတိုင်း ကောလဟာလတွေ လွှင့်လို့ကောင်းတုန်း၊ သတင်း ထက် အတင်းတွေကို ပြောလို့ကောင်းတုန်းပါပဲ။
သတင်းမှားတွေ၊ ကောလဟာလတွေ အမြဲ လွှင့်နေမှုနဲ့ နာမည်ပျက်နေတဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက သူဘာသူနေတဲ့ အဆိုတော် မေဆွိ ကိုတောင် သေတယ်လို့ လွှင့်ခဲ့ဖူးပါဘယ်။ အခုတစ်ခါလည်း ဝန်ကြီး တွေ ပြုတ်ပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းမှားတွေ ထပ်ပြီး လွှင့်ပြန်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ သတင်းဌာန ကို ရပ်တည်နိုင်ဖို့ စာဖတ်ပရိတ်သပ်တွေဆီက အလှူခံထားရတာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာန အနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေအပေါ်မှာ လေးစားမှု မရှိပါဘူး။ သတင်းရှာပါဆိုရင် facebook ပေါ်တက်ပြီး တွေ့သမျှ ဟာ ယူလာပြီး တင်နေသလို ပေးစာ တွေ၊ အစိုးရသတင်းစာထဲက စာတွေနဲ့ ဂျာနယ် ပေါင်းစုံက စာတွေပဲ ပြန်တင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရလာတဲ့ သတင်းကို မှန်လား မှားလားလည်း သေချာ စိစစ်မှု မရှိပဲ ပရိတ်သက်တွေ ခေါင်းထဲကို ရောက်သွားမယ့် သတင်းကို ဖြစ်သလို ထုတ်လွှင့်နေတာ ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ သတင်းဌာနရဲ့ အမြှော်အမြင်ကြီးမှုနဲ့ အမှားတွေကို ကြိုမြင်မှုကို ကျေးစေတမန်ဘလော့မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
" ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးတွေ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ မသန်စွမ်း အနုပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုကို ၁-၁-၂၀၁၁ရက်နေ့က ကြည့်ရှု အားပေးတဲ့ သတင်းကို ၂-၁၁-၂၀၁၁ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ထုတ်တဲ့ သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း နိုင်ငံ့တာဝန်နဲ့ ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ် နိုင်ငံကို သွားရောက်နေလို့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းရဲ့ နေရာမှာ ခေတ္တ တာဝန်ယူပေးထားတဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ မြန်မာ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ခေတ္တပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးလို့ ဖော်ပြ လိုက်တဲ့ သတင်းကို အမြဲတမ်း လိမ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်ကြတဲ့ ပြည်သူကို လှည့်စားနေကြပုံစံအတိုင်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာနနဲ့ ပြည်ပက သတင်းဌာနအချို့ ထင်ကြေးနဲ့ ရုတ်တန်း ရမ်းတုတ်ကြတော့တာပဲဗျာ။
သူတို့ရဲ လန်ကြုတ် ဇာတ်လမ်းကလည်း ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဗျ။ ဘာတဲ့ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း ပြုတ်ပြီ၊ ဘယ်ပျောက်နေလဲ၊ ဘုန်းကြီးသွားဝတ်နေတယ် စတဲ့ မရေမရာ သတင်းတွေနဲ့ မီဒီယာ လောကတွင်း ဖွနည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖွကြတာ တော်တော် ရီစရာကောင်းတယ်ဗျာ။ ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ မဟုတ်မဟတ် လုပ်ဇာတ်ကို ထပ်ပြီး နောက်က လိုက်ခင်းကြသေးတယ်။ Facebook မှာ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၊ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်၊ ဟိုတယ်ခရီးနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းနဲ့ ဦးကျော်စွာခိုင်တို့ ငါးဦး ပြုတ်ပြီး ဆိုတဲ့ သတင်းကို ခပ်တည်တည်နဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက လာတဲ့ သတင်းအရ သိရတယ်လေး ဘာလေးနဲ့ ကောလဟလ လုပ်ဇာတ်ခင်းကြသေးတယ်ဗျာ။"
လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက်ခေတ်မှာ သတင်းတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရပေမယ့်လည်း သတင်းတွေ က မမှန်တာတွေ များနေပါတယ်။ အတိုက်အခံဖက်မှ သတင်းတင်တဲ့လူတွေကလည်း နားစွန်နားဖျား ကြားတာကို အဟုတ်မှတ်တင်နေကြပြီး အဲဒီ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ သတင်းအပေါ်မှာလည်း တာဝန်ယူမှု လုံးဝ မရှိကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ သတင်း က မှားသွားရင်လည်း ပြန်လည် တောင်းပန်မှုမရှိပဲ ဖာသိဖာသာ နေနေတတ်ကြပါတယ်။ အတိုက်အခံဖက်မှာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လွှင့်နေသမျှ သတင်းတွေကို မှန်သင့်ကြောင်းနဲ့ သတင်းဖတ်သူတွေကို လေးစားသင့်ကြောင်းကို ဝါရင့်သတင်းစာ ဆရာကြီး တစ်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
"ဒီနေ့ ခေတ်က အင်တာနက် ခေတ်ဆိုတော့ သတင်းက အရမ်းမြန်တယ်၊ သတင်းမြန်တာ သိပ်ကောင်းပေမယ့် သတင်း မမှန်တာက သိပ်ဆိုးတယ်.... အထူးသဖြင့် အစိုးရအတိုက်အခံ သတင်းလွှင့်သူတွေရဲ့ သတင်းတွေကို လေ့လာကြည့်ချိန်မှာ သတင်း ၁၀ ခု မှာ ၉ ခု က အမှားတွေ ဖြစ်နေတယ်... ဒါက စာဖတ်သူတွေကို မလေးစားတာပဲ... သတင်းသမားဆိုတာ ဒီလိုမလုပ်ရဘူး... ကိုယ်တင်တဲ့သတင်းကို ၁၀၀% တာဝန်ယူရမယ်၊ ပြီးတော့ မှားသွားရင်လည်း ပြန်တောင်းပန်နိုင်ရမယ်... စာဖတ်တဲ့လူတွေကလည်း အတိုက်အခံ မီဒီယာ တွေရဲ့ အကျင့်ပျက်နေတာတွေ၊ မတရားသဖြင့် သတင်းမှားတွေ ထုတ်လွှင့်နေတာတွေကို ဒီတိုင်း ဆက်ပြီး လွှတ်မထားရဘူး... မတရားတာကို မတရားဘူးလို့ ပြောရဲရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်း ပြောဖူးတာပဲ... မဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ပြောရဲရမယ်၊ အမှားတွေ ဆက်မလွှင့်ဖို့ ပြောရဲရမယ်... သတင်းဌာနတွေကလည်း ပိုက်ဆံရဖို့ ဆိုတာထက် ကိုယ့်အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားရမယ်...." လို့ ပြောပါတယ်။
အတိုက်အခံသတင်းမီဒီယာတွေ အားလုံးဟာ အစိုးရသစ် မတိုင်ခင်ကတည်းက အစိုးထဲမှာ ပြိုကွဲနေကြောင်း၊ စစ်တပ်က ပြိုကွဲနေကြောင်း၊ ဦးမောင်အေး ကို ဦးသန်းရွှေ က အနားပေးလိုက်ကြောင်း၊ ဦးမောင်အေးက အာဏာသိမ်းတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးမျိုး မဟုတ်တာတွေ အမြဲ လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာလဲ အစိုးရအဖွဲ့မှာ သဘောထား တင်းမာသူတွေနဲ့ ပျော့ပြောင်းသူတွေ ဆိုပြီး နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေကြာင်း သတင်းတွေကို အခြေအမြစ် တိတိကျကျ မရှိပဲ လွှင့်နေကြပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိုက်အခံ ပါတီပျက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီ တွင်းမှာ လောလောဆယ် မှတ်ပုံတင်လိုသူတွေနဲ့ မှတ်ပုံ မတင်လိုသူတွေ ဆိုပြီး လူသိရှင်ကြား မြိုင်မြိုင်စိုင်စိုင် နှစ်ခြမ်းကွဲနေတာကိုတော့ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခြင်း မရှိကြပါဘူး။
NLD က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်ရောက်မလာခင်က မှတ်ပုံတင်လိုသူများနဲ့ မတင်လိုသူများ ဆိုပြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အဘိုးကြီး အဖွားကြီး အများစုက မှတ်ပုံမတင်လိုကြပဲ လူငယ်တွေက မှတ်ပုံတင်လိုကြကာ NLD က နေ ခွဲထွက်သွားကြပါတယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက ကျန်ခဲ့တဲ့ NLD တစ်ဖွဲ့သားလုံးက NDF နဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ တို့ကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြမ်းတိုက်မည့်သူတွေ၊ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ နောက်က ဖြတ်လျှောက် သူတွေ ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုကျတော့လည်း NLD ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြမ်းတိုက်ဖို့ ကို သဘောထားကွဲနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပြန်လာလာချင်းမှာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး လို့ အော်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အမျိုးသားကို ရင်ကြားမစေ့နိုင်ပဲ လောလောဆယ် သဘောထား ကွဲနေတဲ့ NLD ကို ရင်ကြားစေ့နေရပြန်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိုက်အခံ မီဒီယာတွေဖက်က အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြမှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ABSDF ၂၃ နှစ် ပြည့်တာကို ဖော်ပြခဲ့ကြပေမယ့်၊ ABSDF နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းအကြောင်းတွေ၊ ဘာကြောင့် နှစ်ခြမ်းကွဲ ရခြင်းအကြောင်းတွေကို တော့ ထိန်ချန်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဒီနေ့ ကြွချီလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ရဲ့ စွယ်တော်မြတ် အကြောင်း သတင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာ သတင်းကို ဘယ်မှာမှ မဖော်ပြပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်းဆိုပေမယ့်လည်း အစိုးရနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ ရဲ့ ကောလဟာလတွေနဲ့ အတင်းတွေ၊ အစိုးရ အတိုက်အခံတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို လူအများက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြတာကြောင့် သတင့်ဖြန့်သူများအနေနဲ့ ပရိတ်သက်အကြိုက်ကိုလိုက်ကာ ဖြန့်ပေးနေရကြောင်းကို အခကြေးငွေယူကာ ဝါဒမှိုင်းတိုက် သတင်းဖြန့်ပေးနေသူ ဗမာ့သွေး က အခုလို ပြောပါတယ်
"ဒီနေ့ အင်တာနက် သုံးသူတွေက hot news ကို ပဲစိတ်ဝင်စားတာဗျ.. ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ပရိတ်သက်အကြိုက်ကို သိရတယ်... ကိုယ်တိုင် သတင်းစုံစမ်းပြီး သတင်းဖြန့်တဲ့လူတော့ ဒီလောကမှာ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးပေါ့.. ဒီလိုပဲ ဟိုက ရေးထားတာ ပြန်ကူး၊ ဒီကရေးထားတာ ပြန်ကူး လုပ်ရတယ်... ပြီးတော့ အစိုးရမီဒီယာဆိုတာမျိုးက ဦးကျော်ဆန်း မျက်နှာလောက်ပဲ ကြည့်ရတာ ... ကျွန်တော်တို့က လူတကာမျက်နှာကို ကြည့်နေရ၊ ကြောက်နေရတာဗျ.... လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ဆိုပေမယ့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်တဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက် ပါသွားရင် ဖုန်းနံပတ်ပြော၊ လိပ်စာပြော လာသတ်မယ် ဆိုပြီး ချိန်းခြောက်တာတွေ ခံရတယ်... ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်အတွက်တော့ ကိုယ့်စီးပွားရေးကို အထိခိုက်မခံနိုင်သလို မိုက်ရူးရဲတွေကိုလည်း ကြောက်ရတယ်..." လို့ပြောပါတယ်။
ကျေးစေတမန် ဘလော့မှာတော့ "တော်တော်ကို ရီစရာကောင်းတဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနနဲ့ ပြည်ပက ခေတ်သစ် သူတောင်းစားတွေလို့ ပြောရမှာပဲ။ လုပ်ကြံ လီစယ်စရာ သတင်းတွေ မျိုးစုံ ရှိပါတယ် ဒီလို မသေမချာ မရေမရာနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ သတင်းကို အတင်းဇွတ် အမှန်လိုလုပ်ပြီး ဟိတ်ဟန် အပြည့်နဲ့ ပြည်သူကို သတင်းထူးတွေ သတင်းဦးတွေ ပေးနေသလို လုပ်နေတဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနနဲ့ ပြည်ပက မြန်မာအစိုးရ မကောင်းကြောင်း တွင်တွင် အော်နေတဲ့ စိတ်ထားမှန်ဟာ ဒီလို အလိမ်ဇာတ်ကွက်ထွင် သမားတွေပါလားလို့ အခုသတင်းက သက်သေ ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဧရာဝတီ သတင်းဌာန၊ ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ဂ်နဲ့ အဲဒီလူစုက Account ဖွင့် သုံးစွဲနေတဲ့ Facebook တွေမှာ တောင်စဉ်ရေမရ ထင်ကြေး ဇာတ်လမ်းတွေ လုပ်ကြံထုတ်လွှင့်နေတာကို ယခု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းရဲ့ သတင်းက သက်သေပြလို့နေပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အတိတ်ကာလက လုပ်ကြံသတင်းတွေနဲ့ ပြည်သူကို လှည့်စားလိုက်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူကို ရန်တိုက်ပေးလိုက်၊ တိုင်းရင်း သားတွေ အချင်းချင်းကြား သွေးခွဲသပ်လျှို ၀ါဒဖြန့်လိုက်၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းများကြား ထင်ယောင်ထင်မှား သတင်းများ ထုတ်လွှင့်လိုက်နဲ့ လုပ်ကြံသတင်းတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေတဲ့ မုသားလက်နက်ကိုင် ပြည်ဖျက် သမားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ပြောသမျှ သူတို့နှပ်ကြောင်း ပေးသမျှ ယုံမှတ်လို့ လိုက်လုပ်ကြ ပြောကြဆိုကြ အထင်အမြင်တွေ လွဲကြမယ်ဆိုရင် ဒေ၀ဒတ်ကို ဆရာတင်တဲ့ အဇာတသတ် ထက်ပင် ပိုပြီး ဒုက္ခတွေ့ ဖို့သာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။"
"ယခုလို နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အသီးသီးမှာရှိတဲ့ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များက အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း နေချိန်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ အင်တာနက်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ တင်ပြီး မြန်မာပြည်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေကို အခြေအမြစ်မရှိ၊ တိကျသေချာမှု မရှိဘဲနဲ့ စိတ်မှန်းနဲ့ ပြောဆိုနေမှုများဟာ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ့်ဘာသာ ဖော်ပြနေတာသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ အချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ယခင်က လုံးဝဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံများကတောင် အားပေး ထောက်ခံနေတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူး မရှိ၊ မြန်မာပြည်သူများ အတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးမရှိဘဲ ရေရာသေချာမှု မရှိတဲ့ သတင်းတွေကိုတင်၊ မိမိတို့ စားဝတ်နေရေး ဖူလုံရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မှန်တာမမှန်တာ ဝေဖန် သုံးသပ်မှု မရှိဘဲ ပြောချင်တာပြော နေကြတဲ့ သူများကို ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ် ပြန်မြင်အောင် ကြည့်ကြပါအုံးလို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။" ရေးသား ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အတိုက်အခံ သတင်းလွှင့်သူများအနေနဲ့ သမှားတွေ ထုတ်လွှင့်မှု ကြောင့် လူထု က စိတ်ပျက်နေကြပြီး ဘီဘီစီ သတင်းနဲ့ လူထုကြား ဖြစ်နေတဲ့ ပဠိပက္ခအပါအဝင် အမျိုးသားရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ တခြားသတင်းတွေကို ထိန်ချန်ထားခြင်းတွေကြောင့် လူထုက တင်းမာနေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၅)
20:03:00 Anonymous No comments
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၅):
Naing Naing Htoon ‎@@ ပိန်းတာမဟုတ်ပါဘူး.... ဒေါ်လာမျက်နှာကြောင့် ဘီဘီစီ မှာရှိတဲ့ သောက်မျိုးတွေ ဟာ ကုလား ဖင်နောက်လိုက်သွားတာပါ.... $$
คน รัก แท้ๆๆ ဘီဘီစီ မြန်မာအသံလှိုင်းကလူတွေဘယ်သွားသေကုန်ပြီလဲ ပြောတော့မျိုးချစ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားရေကိုရှေးရှုနေပါတယ်ဆို အခုကဘာလဲ သေကုန်ပြီလားမပြောတော့ဘူးလား =ီး ဆို့နေလို့လား
Tharr Phru ဒီလောက်ဆို..ရှက်သင့်ပါပြီ BBC ရယ် ဒီကြားထဲကမှ..အမှန်တရားကို...မျက်ကွယ်ပြုနေမယ်ဆိုရင်တော့....မင်းတို့စောက်ရှက်မရှိတာပဲဟေ့....!!!!
Si Thu M H ဘီဘီစီ အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းဌာန ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို တရားဝင်ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
Felix Phyo Wai Thaw မင်းဒီ ဘင်္ဂလီတွေကိုတိုင်းရင်းသားလုပ်တဲ့ကိစ္စ သမိုင်းအကိုးအကားနဲ့ရှိရင်လဲ သေချာရှင်းပြလိုက်စမ်းပါ BBC မသေချာပဲတင်ထားတယ်ဆိုလဲ အမှားကို ဝန်ခံလိုက်ပါ။ ပုန်းမနေစမ်းပါနဲ့...အမှန်တွေရေးလိုက်ရလို့ စားခွက်ပျောက် သွားခဲ့ရင် ငါတို့ပြည်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ အလှူတွေမှာ တက်စားစမ်းပါ...ပိုသိက္ခာရှိပါတယ
်အလောင်း စည် သူ မြေမြိုလို လူမကုန်၊လူမြိုလို့ လူကုန်တယ်ဆိုတာ ဒီသတင်းမျိုးတွေ့ကြောင့်ပါ။ သတင်းဆရာများခင်ဗျား ကိုယ့်ကြောင့် လူမျိုးဂုဏ်မတက်ရင်နေ၊ကိုယ့်ကြောင့် လူမျိုးပျောက်မဲ့လုပ်မျိုး နောက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Ko Tun တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ ကောင်တွေ။ မင်းတို့ အယင်ကလုပ်ထားတာတွေအားလုံးအလကားဘဲ။ ပိုက်ဆံရတိုင်း ဟစ်နေတာ။ မင်းတို့လဲ ဘဂါင်္လီ လူမျိုးဘ၀ပြောင်းကြတော့။ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြီး မြန်မာလူမျိုး ဖျက်တဲ့ ခွေးတွေ
Nga Tun ရိုဟင်ဂျာ(ကုလား)နဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားခုချိန်မှာ ဘာပြဿနာမရှိသေးပါဖူးး(မြန်မာ နိုင်ငံ နယ်စပ်များတွင် နေထိုင်ကြပြီး အစိုးရနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေကြသော လူနည်းစုများမှ လူသိများသော အုပ်စုများကို ဖော်ပြလိုရင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။)အဆိုအရအဆက်အစပ်မရှိပါ..
ဆန်း သစ် ကဲ BBC မြန်မာပိုင်းကလူတွေ ခင်ဗျားတို့ရွေးစရာနှစ်ခုပဲရှိတယ် မြန်မာပြည် လား ရိုဟင်ဂျာကုလားအခွင့်အရေးလား နှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကိုရွေးရင်တော့ကျန်တစ်ခုကိုပြတ်သားရလိမ့်မယ်။အမှန်နဲ့အမှားကိုကိုယ့်ဦးနောက်နဲ့ကိုယ်သာစဉ်းစားကြတော့..
Thura Tun BBCမှာအလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာများ ယခုပုံကိုပြန်ကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးခဲ့သောကျေးဇူးတရားကိုပြန်အောက်မေ့ကြပါ ၊တစုံတရာကိုပြောပြချင်ဇောနဲ့ အသိ သတိများမလွတ်စေချင်ပါ ---
Hlwan Moe BBC World Service မှာ ကျွန်တော့် ကော်မန့် ရေးခွင့် ပိတ်ထားပါသည် ခင်ဗျာ။ ခွေးမျိုး အင်္ဂလိပ်ကောင်တွေ နဲ့ မြန်မာ သူတောင်းစားကောင်တွေ။
အိမ် အိမ် ကဲ ... BBC ရေ ဖြေရှင်းချက် တောင်းဆိုနေသူတွေလဲ မနဲတော့ဘူး၊ ဒီအတိုင်းပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေတော့မှာလား၊ တခုခုတော့ လုပ်ဖို့ လိုပြီထင်တယ်။
Si Thu M H why BBC Team delete comments and posts shame on BBC . what is the freedom talk ? can we blame on yours mistake ? when BBC public that was mistake and apologise for it , we will stop blame on BBC . come on . go for it !
Thazin Mon သြော်.. တိုင်းပြည်သမိုင်းကို လိမ်မှ ထမင်းစားရတဲ့ လူတွေပါလားးးးးးးးးးး
Myo Min Aung ဘီဘီစီ မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေ ခင်မျာ့ ......ခင်များတို့ ဆွေးမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေသေးတယ် မဟုတ်လား.....
Zaw Min Aung အမြန်ဆုံးဖြေရှင်ပေးပါ
ဦး စစ်မင်း ခု ပြောနေကြတာ ရခိုင် တွေပဲလို့မထင်နဲ့ .. တစ်မျိုး သား လုံး တစ်မြေထဲဖွါး တိုင်းရင်းသား အားလုံးက လုံးဝ လက်မခံဘူး..။ ညောင်းရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ် မြန်မာတွေ ကောက် ရိုးမီးလို့ မထင်နဲ့ ..။
Si Thu M H i repeat bcoz BBC Deleted my post , ဘီဘီစီ အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းဌာန ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို တရားဝင်ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ပိုး ဖလံ ဟေ့ BBC ကလူတွေ မင်းတို.ကော ဘာလူမျိုးလဲ မေးချင်တယ် မင်းတို.က ပိုက်ဆံရရင် အမေတောင် ရောင်းစားမဲ့ကောင်တွေထင်တယ်
Thi Ha ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာလူမျိးစုဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းထုတ်လွင့်မိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဝန်ခံထုတ်လွင့်ပေးပါမှ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်နိုင်ပါမယ်။ လေးစားစွာဖြင့် တာင်းဆိုလိုက်ပါသည် BBC ခင်ဗျား။
Thazin Mon မလိမ့်တပတ် လုပ်သွားပြန်ပြီ ဘီဘီစီ....
Zaw Ko Ko ဘီဘီစီ မတောင်းပန်သရွေ့ ( ကြေနပ်လောက်တဲ့အထိတောင်းပန်ရမယ်) ဘီဘီစီဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ရန်သူပဲ။
Billy Hanna ဘီဘီစီရေ သိချင်တာလေးရှိလို့... သတင်းဌာနတစ်ခုက map of UK ပေါ်မှာ England နေရာကို မျှားထိုးပြီး အာရပ်တွေ ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ပုံ ထည့်မယ်၊ Scotland မှာ Russians တွေကို စစ်ဝတ်စုံနဲ့ တင်မယ်၊ Wales မှာ တရုတ်တွေပုံ တင်မယ် ... ပြီးတော့မှ ပုံအညွှန်းစာသားကို UK's Minorities လို့ ရေးပေးရင် ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို တုန့်ပြန်မှာလဲ? ဘီဘီစီဖြေပေးပါ။
Thi Ha ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာလူမျိးစုဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းထုတ်လွင့်မိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဝန်ခံထုတ်လွင့်ပေးပါမှ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်နိုင်ပါမယ်။ လေးစားစွာဖြင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည် BBC ခင်ဗျား။ (ထပ်ခါထပ်ခါ တင်မိတာတော့ အားနာပါတယ်ဗျာ။)
Nyaungpin Tasay (၁) မစင်ကြယ်၊ (၂) မကောင်းသော အနံ့ရှိ၏၊ (၃) ဘေးဘျမ်းရှိ၏၊ (၄) သရဲသဘက်တို့ နေရာဖြစ်၏။ (၅) များစွာသော လူအပေါင်းတို့ ငိုကြွေးရာဖြစ်၏၊ “ရဟန်းတို့၊ သင်္ချိုင်း၌ အပြစ်တို့သည် ဤငါးမျိုးတို့တည်း။
Aye Thidar ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲတောင်းဆိုတော့မယ် ရခိုင်ပြည်ပေါ် ကုလားပုံတင်ထားတဲ့ ကိစကို လုပ်တဲ့လူတွေ ကိုယ်တိုင် (အန်နာဂျုံး ဆိုတာလား) တရားဝင်တောင်းပန်ပေးခိုင်းပါ ဒီလောက်တောင်းဆိုနေကျတာကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စတိုင်နဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့ BBC လုပ်လာခဲ့သမျှ ဒီအမှားတစ်ခုကြောင့် မြန်မာပြည်သားတွေBBC ကိုမုန်းသွားနိုင်ပါတယ်
Koko Messi ပြောင်ချင်နောက်ချင်ရင် ဇာတ်ထဲသွားကြ..ကျော်ချင်ခွချင်ရင်ဆိုက်ကားနင်း...ရူးချင်နှမ်းချင်ရင်...အရူးထောင်သွား..ပိုက်ဆံလိုချင်ရင်......-ာသည်လုပ်ကြ......တိုင်းပြည်ကိုတော့ ပိုက်ဆံရဖို့ပဲကြည့်ပီး..မျက်နှာပြောင်မတိုက်နဲ့...ပြန်တောင်းပန်
Winnaing Shinn BBC့ကကောင်တွေမူဆလင်ကမင်းတိုအဖေလား အမျိုးတော့ မဖျက်နဲ
Ko Tun သူတို့က ရိုဟင်ဂျာ အထီး/အမ တွေဖြစ်ကုန်ပြီလေ။ ပိုက်ဆံရယင် အကုန်လုပ်မည့် လူတန်းစားထဲ ပါသွားပြီ။
May Nwe ကျက်သရေတုန်းလိုက်တာ....:(
Gipsy Moe Tein ကုလားတွေကို အဲလောက်ချစ်နေရင်လဲ မင်းတို့ဘီဘီစီမှာ ခေါ်ပြီး အလုပ်ခန့်ထားပေးလိုက်ကြလေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ အတင်းထိုးမထည့်နဲ့ ပိုက်ဆံရတိုင်း
Burma Muckraker အမျိုး၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ အတွက် မို့BBC ကတောင်း ပန် တဲ့ အထိ တိုက်ပွဲ ၀င်ကြ။ အလျှော့ မပေးကြ နဲ့ ။ မနေ့က ယူရို ဇုန် ကယ်ဆယ်ရေး ညလုံးပေါက် ဆွေးနွေး ပွဲ ရလာဒ် တွေ အရ ဗြိတိသျှ အစိုးရ က ဘတ်ဂျက် အကြီး အကျယ် ဖြတ် တောက် လိမ်မယ်။ BBC Burmese လည်း ဒီနှစ်ပါမယ်။မနှစ်က ဒေါ်စု ကယ်ထား လို့ ။
Burma Muckraker မြေမြို ၍ လူမျိုး မပျောက် ဘီဘီစီ မြို မှ လူမျိုး ပျောက် မည်။
Thu Rein Phoo BBC, don't abuse our Nation. BBC မှာလုပ်နေတဲ့မြန်မာတွေအစါး ရှက်မိပါတယ်
Chris Soe BBC.. shame on you.. you are suchadisgrace... shame on you... all Burmese people hate you more than Than Shwe... you'd better change your name to BBC Rohingya Service.. You shameless people...
Zaw Myo လူကြီးလူကောင်း အဖွဲ့အစည်းကောင်း တို့မည်သည်မှာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ကိုယ် တသွေမလွဲ တာဝန်ယူ၏။။။။။။။
Felix Phyo Wai Thaw သမိုင်းကိုထိခိုက်လာတဲ့ အထိ မှားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အတွက် အငြင်းပွားမှုအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ စကားလုံးသုံးစွဲမှုအတွက် ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ယူပါ။
Khaing Minko BBC ၀ိုင်းတော်သားတွေ လေပန်းလာတာ ဘယ်နှနှစ်ကြာပြီလဲ ပန်းနေတဲ့လေက ဘယ်မှာအကျိုးရှိလို့လဲ မြန်မာပြည်ကို BBC ကိုဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲ BBC ၀ိုင်းတော်သားတွေနေ့တိုင်းအော်နေတော့ မြန်မာပြည်က ဘာတွေတိုးတက်နေလို့ လဲ BBC၀ိုင်းတော်သားတွေ မြန်ပြည်သူတွေမပေါ်မှာ သွေးမကွဲစေချင်တဲ့စိတ်ဓါတ် ရှိကြရင် ဒီရို့ဟင်ဂျာကိစ္စကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးကြပါ။
Yin Moore T မြန်မာ့သမိုင်းအမှန်ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက်။ အထူးသဖြင့်ဘီဘီဆီမှာလုပ်နေတဲ့ ပညာမဲ့လူတန်းစားတရပ်အတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင်မွန်ဖြစ်မှာပါ။ BBC မှာပြည်သူတွေကလာတင်သွားတဲ့ links တွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ရောင်းစားရတယ်လို့ ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး။
Sal Ween bbc မှာ ကုလားတွေကြီးစိုးနေပါဘီ။ ကုလားတွေက ဘင်္ဂါလီတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာ မဆန်းပါဘူး။ တလောက မျိုးသာထက်ဆိုတဲ့ သတင်းထောက် ကုလားပုံဖမ်း ကုလားမင်းသား ဒီဇိုင်းနဲ့ မြန်မာပြည်က နာမည်ကျော် လက်မရွံ့လူသတ်သမားတွေနဲ့ တပြုံးပြုံး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံ နေလိုက်တာများ သိသာလှပါတယ်.. bbc မြန်မာပိုင်းနဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရ ပေါင်းစားနေပြီဆိုတာ။
Khaing Minko မြန်မာ့သမိုင်းကိုလိမ်တာ ရိုဟင်ဂျာက သူတို့လူမျိုးအတွက်လိမ်တာပါ BBC ကတော့ သူတို့မိသားစုဝမ်းရေအတွက်ကွ ...
Sal Ween ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီကောင်တွေကို မဲရေ၇းအတွက် အောင်သောင်းကပေါင်း.. လာဘ်စားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး၊ လ၀က တွေက မှတ်ပုံတင်ပေးနဲ့ ဗမာပြည်ကြီးကိုရောင်းစားခဲ့ကြတာ အခု ဘီဘီစီကုလားတွေကပါပေါင်းပြီး ငါတို့တိုင်းပြည်ကုိူလုပ်ကြံနေကြပြီ။ ကမ္ဘာမကြေဘူးကွ ဘီဘီစီ။ ငလိမ်တွေ....
Khu Daun တွေးကြည့်ရင်သူတို့ တွေကိုအသံနာလွန်းလို့ ဗျာ... ပြီးတော့.. ကြွားလုံးဝါးလုံတွေပြောနှင့် ပြည်သူတွေဝါကြွားပြန်တယ်... သူတို့ တွေဟာ ရုံးတက်ရင် မြန်မာအ၀တ်အစားဝတ်ပြီးရုံးတက်ကြောင်း.. မြန်မာဂုဏ်ကိုဆောင်ကြောင်း.. မြန်မာထမင်းကိုစုစားရတာ ဘယ်လိုအရာတွေ့ ကြောင်း..စသည်ဖြင့် အမျိုးချစ်ကြောင်းမိတ်ကပ်လိမ်းသလိုအလှပြပြောပြီး... အခုအဖြစ်က သူတို့ တွေမိတ်ကပ်လိမ်းပြောသောမျိုးချစ်စကားဟာ...မိန့်မပျက်ပါးပေါ်မှ..မိတ်ကပ်နှင့်အတူတူဘဲ။
James Mmt ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့တဲ့ BBC News နှင့် BBC Burmese တို့ ပူးပေါင်းလိမ်လည်တဲ့လုပ်ရပ်ကို ဒီပုံမှာ အထင်းသားတွေ့နိုင်တယ်... ပထမဆုံးပုံမှာ Anna Jones ရဲ့ Bleak outlook for Burma's ethnic groups ဆောင်းပါးကို တင်ထားတဲ့ ရက်စွဲ 06 November 2010 ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်.... အားလုံး ၀ိုင်းပြီး Complain တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ၊ ဒုတိယပုံမှာတော့ 18 November 2010 နဲ့ Who are Burma's minority groups ဆိုပြီးတော့ မြေပုံကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်ပြင်လာပီး တင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်... တတိယပုံမှာတော့ Anna Jones ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ မြေပုံကို 27 October 2011 မှာ အချို့အချက်တွေ ပြင်စရာရှိလို့ဆိုပြီး မြေပုံကိုဖယ်ထုတ်ထားပြီး အသစ်ပြင်ထားတဲ့ မြေပုံကို ပြန်အစားထိုးထားတယ်လို့ ရေးထားတယ်... 28 October 2011 မှာပြင်တဲ့ မြေပုံဟာ 18 November 2010 မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရေးသူမဲ့ သတင်းထဲမှာ ဘာလို့ပြင်ပီးသားဖြစ်နေလဲ ရှေ့နောက်မညီတာ မရှက်ဘူးလား... နောက်ပီးတော့ BBC ကပြန်ရေးလာတဲ့ စာထဲမှာလည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖယ်ရှားချန်ထားပြီး ရိုဟင်ဂျာကို ရခိုင်ပြည်ရဲ့လူမျိုးလို့ ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ဆိုပီးတော့ Rohingya to Arakan state was not intended to imply ownership of the state or to marginalise the Rakhine people, but simply to show readers the state in which the Rohingya live. ဆိုပြီးရေးထားတယ်.... ဒါပေမဲ့ Anna Jones ရဲ့ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ စာသားတွေနဲ့ လုံးဝလိုက်ဖက်မှုမရှိကတည်းက ကမန်းကတန်း လုပ်ကြံပြီး ပြန်ပြင်ထားတာ တအားသိသာတယ်... ဘီဘီစီ အရှက်မရှိသလို ဘီဘီစီမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေလည်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ကင်းမဲ့ပြီး တာဝန်မဲ့ငြိမ်နေကတည်းက ကပ်ဖားရပ်ဖား ခံယူချက်မရှိတဲ့ သာရာစားတွေမှန်း တအားသိသာတယ်.... ရွံဖို့ကောင်းတယ်....
Thaung Htike Aung BBC မြန်မာပိုင်းအစီစဉ်မှာ..လုပ်နေကြတဲ့ staff တွေလဲ..မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေဆိုခုကိတ်စကို..ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်အောင်..နာသင့်ပါတယ်.. ခင်ဗျားတို့ရနေတဲ့..ဒေါ်လာမျက်နှာထောက်ပီး..မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်တော့..မပြောတတ်ဘူး.. ကိုယ်အတွက်မတွေးတောင် ကိုယ့် Generation အတွက်တော့..တွေးဗျ..ဒါက..လူကို.လူမျို..မဲ့ကိန်း.. WTF :angry
Chris Soe : BBC လိမ်နေသည်... BBC ညာနေသည်....BBC အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုဖြတ်ဆီးနေသည်... BBC မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို ရိုဟင်ဂျာကလားဇက် သွင်းနေသည် ....
KoThar Gyi haha,BBC is blocki me...............shame on you
Ko Tun : BBC ..... ကအထီး/အမတွေ မြန်မာပြည်ကို ချစ်ယင် မင်းတုိ့ရဲ့ ငွေမျက်နှာကြည့်တဲ့ လုပ်ရပ် ချက်ချင်းရပ်ပါ။ မြန်မာပြည်သူ/သားအားလုံးကို တရားဝင် တောင်းပန်ပါ။ မင်းတို့ရဲ့ website page မှာ English လိုရေးပြီး ကမ္ဘာသိအောင် တရားဝင်ပြန်တောင်းပန်ပါ။
Ko Tun မင်းတုိ့ရဲ့ ပထွေး/လင် ရိုဟင်ဂျာ တွေရဲ့ မရှိတဲ့ သမိုင်းကို ရှာကြံရေးမနေနဲ့။ ပါးစပ်နဲ့ပြောပြီး စာနဲ့ ရေးတိုင်း သမိုင်းမဟုတ်ဘူး။ ခိုင်လုံတဲ့ သက်မဲ့ အထောက်အထား များများ ပြနိုင်မှ လူမျိုးသမိုင်းလို့ခေါ်တာ။ အခုတော့ မင်းတို့ ကပိုက်ဆံ ၁ ခုထဲ ကြည့်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ကိုနေရာပေးနေတာ။
Pawtun Zaw : ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာပြည်မြေပုံ ပေါ်မှာ အညွန်းတပ်ပြီးတော့ တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး..... ဆောက်ရမ်းတင်းတယ်....
Thein T Htay : နောက်ဆုံးတော့ ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီ .. စောက်ဆံ မက်တဲ့ ဆောက်ရူးများ...
အရက် သမား ဟုတ်တယ်စောက်ဆံလိုချင်ကြလား.....ဒီလောက်တောင်.........
Thantzin Win : BBC ကို ကန့်ကွက်တယ်။ ဒို့နိုင်ငံကို ဘင်းဂလား ဇာတ်သွင်းပီး ဖျက်ဆီးချင်တာ။ တခြားအကြောင်းအရာတွေများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့ ကုလားတွေက မင်းတို့ပထွေးမို့လို့လား။
Zaw Win Htun : ဘီဘီစီရဲ့ အားနည်းချက်ကို သတင်းဌာနကြီးအနေနဲ့ လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ အနေအ ထားပါ။ ပြန်ကြားလာတဲ့ စာတွေ အရ ဘီဘီစီ ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို သေချာသိပုံမပေါ်ပဲ လူမျိုးတွေအကြားက တိုက်ပွဲပုံစံလိုမျိုး ထင်မြင်ချက်ပေးထားပုံပါပဲ။ ဒါကတော့ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းက လူတွေ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သတိပြုရမှာက ဒီကိစ္စတွေကို လုံးပမ်းနေရင်း မူရင်းတိုက်ပွဲတွေကို မေ့မသွားဖို့ပါပဲ။
Nyan Wint Aung BBC လိမ်နေသည်... BBC ညာနေသည်....BBC အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုဖြတ်ဆီးနေသည်..
Burma Muckraker : ၁၉၉၈ခုနှစ်လောက်ကBBCမြန်မာပိုင်း ဦးလေးကြီးဦးဖေသန်းရဲ့မေးပါးများ စကားရ အစီအစဉ် မှာ "မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တွေက အသေသာခံ သွားမယ်ပြည်သူ့ ဆန္ဒသွေးဆေး မစားဘူး " (ပြည်သူ ဆန္ဒ ကို မလိုက် လျှောဘူး ) လို့သရော် သွားတယ်။ အခု BBC လဲ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေပြီ။
June Da Ha BBC ကို သပိတ်မှောက်ပါသည်....bbc မှာလုပ်နေကြတဲ့ ရခိုင်သားတွေ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ..ဝါအရင့်ဆုံး ဦးအောင်ကျော်ဇံ ခင်ဗျားကြီး ကိုယ့်ဇာတိမွေးရပ်ကို ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရောင်းစား ထားလိုက်လို့ ငြိမ်နေတာလား..လူမျိုးနဲ့ဘာသာတရားကို စော်ကားရင်ဘယ်ကောင်မှအရှင်မထားချင်လောက်မုန်းတယ်နော်..ရခိုင်သားတွေ အမျိုးကိုချစ်တယ်ဆို..
June Da Ha : စောင့်မနေကြပါနဲ့တော့ BBC ကိုသပိတ်မှောက်ကြပါ....
Nang San Hleng BBCမလိုလားရေး ဒို့အရေး။ profileပုံမှာ BBCဆန့်ကျင်တဲ့ပုံတွေကိုတင်ကြပါ။ သူတို့တောင်အဲ့လိုလုပ်နေမှာတော့ BBCဆိုတာမရှိတာပဲကောင်းတယ်။
Azure Cloud : ဘီဘီစီ FB မှာ ဓါတ်ပုံတွေနှင့်တင်မရအောင်လုပ်ထားပြီ... အရင်တင်ထားကြတာတွေလဲ ဖြုတ်လိုက်ပြီထင်ပါရဲ့ ... အခု ဒီနေရာက ပြန်တင်ပြီ... ပြည်သူသိအောင်ပြမယ်...။ အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့ ဘီဘီစီ..၊ သူတို့ တွေက အသံလွှင့်ဌာနမှာ တဖက်သတ် သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတဲ့အကျင့်တွေက ဖျောက်မရဘူး..စစ်အာဏာရှင်အကျင့်အတိုင်းဘဲ။ပြီးတော့ မျိုးချစ်စကားပြောကြပြန်သေးတယ်.. ဘီဘီစီမှာ ရုံးတက်ရင်မြန်မာအ၀တ်အစားသာ ၀တ်ဆင်ပြီ မြန်မာဂုဏ်ဆောင်ကာ ရုံးတက်ကြောင်း..မြန်မာထမင်းများကိုသာယူဆောင်လာပြီး စုပေါင်းစားပြီး မြန်မာအရသာခံကြောင်း.... စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် လေလှိုင်းပေါ်က ကြွားလုံးတွေထုတ်ပြီး..ပြည်သူတွေကို တိုင်းပြည်ချစ်ကြောင်း.. မိတ်ကပ်လိမ်းပြောပြီ ညာကြတယ်..သူတို့ တွေ ပြည်သူတွေ မိတ်ကပ်လိမ်းချစ်ပြကြတဲ့ မိတ်ကပ်အချစ်များဟာ... မိန့် မပျက်ပါးပေါ်မှ မိတ်ကပ်မျိုး ဖြစ်နေကြောင်း အခုဖြစ်ရပ်က သက်သေပြလျှက်ရှိနေတယ်။ အခုမေထားသော မေးခွန်းများဖြေပေးကြပါ.
Ashin Visarada ကမ်းပြိုရင် ဗဟိုလည်း ယိုင်နဲ့လာမှာပဲ။ ကမ်းပါးကို မပြိုပြိုအောင် တူးဖြိုသလို လုပ်နေတဲ့ BBC ရဲ့လုပ်ရပ်ကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ။..